Ka-faa'iideysiga - Teknolojiyada la heli karo ee 2019 | Laga soo bilaabo Linux
Virtualization of Operating Systems (OS) asal ahaan waxay ka kooban tahay awood u lahaanshaha in lagu wadaago isla Hardware dhowr Nidaamyada Howlgalka oo ku shaqeeya qaab gebi ahaanba madax banaan. Tan waxaa lagu sameeyaa iyada oo loo marayo softiweer-ku-ficil-sameynta, kuwaas oo ay ku badan yihiin suuqa kombuyuutarka oo ay jiraan dhawr ikhtiyaar oo bilaash ah oo lahaansho leh.
Dhammaan tiknoolajiyada hadda la heli karo waxay leeyihiin heerar kala duwan oo dhib ah marka la eego rakibiddooda, qaabeynta, adeegsiga iyo helitaanka iyo marin u helidda dukumiintiyada lagama maarmaanka u ah iyaga inay ka adkaadaan. Laakiin dhammaantood waxay diiradda saaraan fududeynta bisha Maajo ama ka yar ficil ahaanshaha ku dhowaad wax kasta oo OS gaar ah (marti) ama OS ah (martigeliye), si loo tijaabiyo ku dhowaad OS kasta iyada oo aan loo baahnayn dirawal adag oo gaar ah.
1 Ahmiyada hufnaanta
2 Faa'iidooyinka Virtualization
3 Faa'iido-darrooyinka ku-habboonaanta
4 Teknoolojiyadda Wax-u-qabashada
Ha ahaato mid shaqeynaya OS dhameystiran ama kaliya 1 ama dhowr codsi, ku shaqeysiintu waa baahi lama huraan ah maaddaama ay noo oggolaaneyso inaan ku ballaarinno fursadahayaga iyo awooddeenna ku dhex jirta barnaamijkeenna hadda (kombiyuutarka / shabakadda)
Dhammaan kuwa ka shaqeeya ama ku raaxeysta Tiknoolajiyadda, waxaa aad muhiim u ah in lala socodsiiyo isbeddelada ka dhacay., ama si loo kordhiyo horumarinteena xirfadeed, kor loogu qaado wax soosaarka shaqadeena ama kaliya loo fududeeyo barashada iyo / ama barida cilmiga kombiyuutarka ugu dambeeyay.
Xamaasad kumbuyuutar, badanaa isticmaalaha guriga oo badanaa isticmaala OS-ga qaaska ah rabitaanka barashada isticmaalka ama isticmaalka faa iidooyinka OS kale oo la yaqaan ama aan ahayn, adigoon u baahnayn inaad qaabeyso kombiyuutarkaaga
Teknoolojiyadaha tan suurta geliyana waa Virtualization of Operating Systems, kaas oo asal ahaan ka kooban awood u lahaanshaha wadaagida isla HW dhowr Nidaamyada Hawlgalka oo ku shaqeeya hab gebi ahaanba madax bannaan.
Tikniyoolajiyadda hadda jirta ee HW waxay ka dhigtay teknoolojiyaddan inay wax badan ka soo baxaan, taasi waa, codsiyada taageera, taas oo maanta noo oggolaaneysa inaan ku shaqeyno hal ama in ka badan Nidaam-hawleed (nidaamyo) ka duwan kuweenna iyo kuweenna, iyadoo si ficil ahaan ah isku awood dhab ah oo mararka qaar xitaa la mid ah ama ka weyn sidii haddii si toos ah loogu rakibay HW-gaaga.
Kaydso kharashyada qalabka cusub ee jirka.
Hoos u Dhigo Arimaha Iswaafajinta Barnaamijka
Badbaadinta saacadaha / foosha ee Cloning nidaamyada kulul.
Badbaadinta saacadaha / shaqada ee Socdaalka nidaamyada kulul
Fududeynta fulinta Deegaanada Imtixaanka
Hagaajinta go'doominta Qalabka, Codsiyada iyo Adeegyada
Hagaajinta Amniga iyo Xogta marin-u-helka gaarka ah ee Qalabka iyo Nidaamyada
Dabacsanaanta iyo kacsanaanta soo celinta Qalabka, Codsiyada iyo Adeegyada.
Soo-celinta hoose ee suuragalka ah
Xaddidaadda Qalabka suurtagalka ah
Kordhinta shaqada sababo la xiriira badashada MV
Khatarta sii kordheysa sababtoo ah bartamaha MV
Khataraha isku mid ahaanta ama isku dheelitir la'aanta qaababka VM
Tikniyoolajiyad wax ku ool ah oo la heli karo ayaa adeegsada waxa loo yaqaan "Hypervisor" ama "Virtual Machine Monitor (VMM)", taas oo aan ka badnayn Platform Virtualization lafteeda, taasi waa, farsamada noo ogolaaneysa inaan adeegsanno, isla mar ahaantaana, OS-yo badan oo marti-geliye ah (Server Server).
Xilligan, Hypervisors waxaa loo kala saari karaa laba nooc:
Nooca 1 (Dhalad, Baadi-bir): Kuwani Hypervisors waa xal Software fuliyay toos toos ah HW dhabta ah ee martida loo yahay (Server Server) si loo xakameeyo HW loona kormeero OS-ga badan. Nidaamyada farsamaysan waxay ku shaqeeyaan heer kale oo ka sarreeya Hypervisor.
Qaar ka mid ah kuwa sida fiican loo yaqaan Nooca 1 Hypervisors waa kuwan soo socda:
VMware: ESX / ESXi / ESXi Bilaash / Hypervisor vSphere
Hypervisors nooca 1 markiisuna wuxuu noqon karaa laba nooc:
Waxaa qoray Microkernel
Nooca 2 (Martigeliyey): Kuwani Hypervisors waa xal Software ah oo ku shaqeeya OS caadiga ah (Linux, Windows, Mac OS) si loo xoojiyo nidaamyada kale ee Hawlgalka. Sidan oo kale, hufnaanta waxay ku dhacdaa lakab ka fog HW haddii aan isbarbardhigno nooca hypervisors nooca 1. Caqli ahaan, tani waxay ka dhigeysaa waxqabadka hooseeya nooca 2 hypervisors.
Qaar ka mid ah Hypervisors nooca 2 aad loo isticmaalo waa kuwan soo socda:
Mashiinka Virtual-ku-saleysan Kernel (KVM)
VMware: Goobta Shaqada, Server, Ciyaaryahan iyo Fusion
Microsoft: PC Virtual, Virtual Server
Casriyeynta Hat Enterprise Virtualization
Hybrid Virtualization waxaa badanaa lagu sheegaa suugaanta qaarkood, taas oo, sida magaceedu sheegayo, ay ka kooban tahay hirgelinta 2 nooc ee Nidaamyada Nidaamyada Nidaamka Hawlgalka ee kor ku xusan ee ku jira isla marti-geliye isku mid ah. Teknoolojiyadaha kale ee caanka ah ee caan ku ahaanshaha la xuso ayaa ah kuwa inta badan la xiriira daruurta ama Kunteenarada. Kuwaas waxaa ka mid ah:
Go'aaminta nooca Teknoolojiyadda Virtualization-ka ee ugu fiican waxay kuxirantahay baahida iyo moodeelka ganacsi ee Urur iyo awoodaha Shaqaalaha IT-ga ee halkaas ka shaqeeya. Laakiin marka la soo koobo waxaa la ogaan karaa in nooca 1 hypervisor uu ka dhakhso badan yahay nooca 2 hypervisor, tan iyo markii ugu horreysay uu si toos ah ula xiriiro HW server-ka. Nooca 1 Hypervisor uma baahna inuu wax ka qabto OS-ga iyo lakabyo kala duwan oo caadi ahaan yareeya awoodaha martigeliyaha Hypervisors.
Waxaan ku soo gabagabeynayaa nooca 1 Hypervisor waxaan ku heli doonnaa waxqabad wanaagsan, miisaan iyo xasillooni. Laakiin, liddi ku ah, waxaan haynaa in nooca noocan ah ee teknolojiyadda waxtarka leh ee HW la taageeray ay aad u xaddidan tahay maaddaama sida caadiga ah ay ku dhisan tahay darawalo xadidan oo fulinteeduna ay ka dhib badan tahay.
In kasta oo nooca 2-aad ee 'Hypervisors' ee caan ka ah caanna ku ah qof walba isla markaana dardar geliyay dhaqdhaqaaqa suugaanta waxaad helaysaa iswaafajin badan tan iyo markii ay leeyihiin shay ballaadhan oo HW ah, maaddaama ay adeegsadaan hufnaan ku saleysan barnaamijyada ku saleysan barnaamijyada Tusaale ahaan, Hypervisor Nooca 2 ah ayaa lagu rakibi karaa laptop-ka aad uga fudud kan Hypervisor-ka Nooca 1-aad.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Casharrada / Buugaagta / Talooyinka » Farsamaynta: Teknolojiyada la Heli Karo ee 2019